Umthi weCherry Blossom - Imithi
Umthi weCherry Blossom
I-Pink Cherry Blossoms
Iintyatyambo zeentyatyambo zibonisa ukufika kwentwasahlobo kunye nokugqabhuka kweentyatyambo ezithambileyo, ezibonakala ngathi uninzi lwemithi luvuka nje ebuthongweni babo basebusika. Inxalenye yabo yeyokuzalwa e-Asiya kwaye baluphawu olubonakalayo kwilizwe laseJapan, apho baziwa njenge sakura .
I-Cherry blossom imithi ikhuliswa ngenxa yeempawu zayo zokuhombisa, hayi iziqhamo. Ezinye iintlobo zeentyatyambo ze-cherry zivelisa iziqhamo, nangona zincinci, zine tart, kwaye zikhethwa ziintaka kunabantu.Kukho iintlobo ezininzi, iintlobo, imihlanganisela, kunye nebrbrids phantsi kwegama lesambulela samacherry adubula iintyatyambo. iimpawu:
uyisusa njani itha kwikhaphethi
Zikhula ngokukhawuleza, kodwa zihlala ixesha elifutshane. Iitsheri ezidubula iintyatyambo zixhaphake kwizifo ezininzi ezinganciphisa ubomi bazo, kodwa nemithi esempilweni kunqabile ukuba iphile iminyaka engaphaya kwama 20.
Ngumthi ophakathi ngokuphakathi, uhlala ukhula ungabikho ngaphezulu kwe-15 okanye i-30 yeenyawo ukuphakama, nangona ezinye iintlobo zinokudlula obu bungakanani. Nangona kunjalo, umkhwa wabo wokukhula uyahluka kakhulu phakathi kweentlobo ezahlukeneyo-ezimileyo, ezisasazekayo kunye nokulila ziyafumaneka.
Umthi weBronze weLeaf Cherry
Ubuhle babo bunzima ukufanisa ngentwasahlobo, nangona ezinye iintlobo zinebronze okanye amagqabi amhlophe ngexesha lokukhula kunye nemibala ekhanyayo ekwindla.
Imithi edumileyo ye10
Cherry Blossom Umxholo Iingcamango zomtshato
Iintlobo zemithi yeCherry: Isikhokelo esineziqhamo
Ukuthintela izifo ekunciphiseni ixesha lokuphila kwemithi yakho yeentyatyambo, zinike elona thuba lihle ngokuzityala kwindawo elungileyo kwaye ujonge iimfuno zabo kulo lonke ixesha lokukhula.
Umthi oMhlophe weCherry Tree
Iitsheri eziqhakaza iintyatyambo zikhetha ilanga elipheleleyo, kodwa kwiindawo ezinemozulu eshushu, ukuzityala apho zizakufumana umthunzi emva kwemini ngumbono olungileyo. Ziyakhula ngesiqingatha sosuku okanye ukukhanya okucociweyo imini yonke, kodwa iintyatyambo ziya kuncitshiswa.
Le asiyomithi iyinyamezelayo imbalela kwaye ukunkcenkceshela rhoqo yinto ephambili yokubanceda ukumelana nezifo. Ukunkcenkceshela nzulu kube kanye ngeveki ehlotyeni ngumgaqo olungileyo wesithupha. Kwiphepha leflip, abonwabisi ukukhula kumhlaba onamanzi amaninzi, ke batyale apho umjelo ulungile okanye wakhe indawo ephantsi, ebanzi yendunduma ebanzi kangangeesentimitha ezisibhozo ukuya kwezili-12 ngaphezulu kwebanga elijikelezileyo njengebhedi yokutyala.
Iitsheri ezidubula iintyatyambo ziphendula kakuhle kumhlaba otyebileyo, ochumileyo, kungumbono olungileyo ukulungisa indawo yokutyala ngokukhululekileyo ngomgquba ngexesha lokutyala. Unokongeza umaleko omncinci womgquba kumphezulu ojikeleze iingcambu zawo kanye ngonyaka ukuwa okanye ukufafaza isichumisi esilinganiselweyo, njenge-10-10-10, ngaphezulu kwendawo yengcambu kube kanye ngenyanga ukusuka entwasahlobo ukuya ngasekupheleni kwehlobo.
Ukulila umthi weCherry
Ngubani i-capricorn ehambelana kakhulu ne
Iitsheri zinomkhwa wokukhula ngokuxineneyo kwaye ukuzicoca kube kanye ngonyaka kunceda ukugcina ifom entle kwaye kunceda nasekuthinteleni izifo zokungunda ezininzi ezihlasela ngokuchaphazela ukuhamba komoya okukhulu.
Coca amasebe akhula aye embindini okanye kwamanye amasebe, ejolise kumasebe ahlukaniswe ngokulinganayo aphuma emthini kwipateni efanayo. Ubusika lelona xesha lilungileyo lokucheba iitsheri.
Uninzi lwamacherry adubula iintyatyambo abonisa iimpawu zohlobo oluthile umonakalo kwizitshabalalisi Ngexesha lokuphila kwabo. Amagqabi adlakadlaka, incindi yegummy emasebeni, iingcebiso ezitshisiweyo kumasebe amancinci kunye nefungus ekhula kwisithsaba seengcambu zezinye zeempawu eziqhelekileyo. Ukongeza ekunikeni umthi olona nyango lusemgangathweni, kukho ezinye iingcebiso ezimbalwa ezinokukunceda ukugcina izinambuzane nezifo zijongile:
ukuba uzothini xa umntwana esweleka ngokungalindelekanga
Qiniseka ukuba imithi ayityalwanga ngaphantsi komgangatho womhlaba, kuba umhlaba omanzi nxamnye nesiqu uyisilwanyana esithwala izifo.
Ngokufanayo, musa ukuvumela i-mulch ifumbe ngokuchasene nesiqu.
Sebenzisa iintsholongwane kwezixhobo zokuthena ngokuntywila iincakuba kwisisombululo seepesenti ezili-10 ngaphambi nasemva kokusebenza kumthi ngamnye.
Susa nayiphi na imithi efileyo okanye enesifo ngokukhawuleza xa ivela emthini.
Ukulahla ukusika kude nomthi kwaye uphakamise kwaye ususe amagqabi ngokuwa ngakunye.
Ukuvavanya ukuba loluphi uhlobo lwesitshabalalisi okanye isifo itsheri akusoloko kulula kwaye unyango lwamachiza kufuneka lusetyenziswe kuphela xa kucacile ukuba lolona nyango lufanelekileyo lwengxaki. Ukuthelekisa iimpawu kwiifoto ezisezincwadini okanye ukuthatha isampulu kwiziko lakho lasegadini sisiqalo esihle. Iofisi yakho yenkonzo yolwandiso lwengingqi inokuba ngumthombo wolwazi omkhulu wokuchonga izifo kunye nokucebisa ngendlela efanelekileyo yokwenza.
Umthi wokuqala weCherry
Iitsheri zeKwanzan zineentyatyambo ezinombala onuka kamnandi onamagqabi amaninzi kwindawo nganye kwaye ithathwa ngokuba yenye yeentlobo ezinganyangekiyo zizifo.
I-Pendula higan cherries ziintlobo ngeentlobo ezililayo ezineentyatyambo ezipinki ezikhanyayo kunye neziqhamo ezincinci ezimnyama ezithanda ukutyiwa ziintaka.
U-Yoshino akebono uyi-cherry enomkhwa wokukhula nkqo, ifom entle ejikeleziweyo, kunye neentyatyambo ezipinki ezikhanyayo.
Iibhola eziqaqambileyo inikeza iintlobo ezintandathu ezahlukeneyo zentyatyambo yecherry; Ixabiso lixabisa ukusuka kwi- $ 50 ukuya kwi- $ 100 kunye nokuthumela, kodwa baqinisekisiwe ukuba zii-5 ukuya kwi-6 iinyawo ubude xa zithunyelwa kwaye uninzi lwemithi yabo yeetsheri yafumana uphononongo oluhle kakhulu kubathengi.
Iindalo zeNdalo ikwafumana uphononongo lwe-stellar kwiintlobo ezisixhenxe ezahlukeneyo zentyatyambo ze-cherry abazinikelayo kwaye amaxabiso abo abekwi- $ 50 ukuya kwi-100 yeedola, nangona ubukhulu bomthi buncinci xa kuthunyelwa
Kukhetho olunamaxabiso aphantsi, zama I-Bay Laurel Nursery , apho iinqanawa zazala iingcambu zeentyatyambo ezingenamdiliya - oku kuthetha ukuba zilele kwaye zithunyelwa ngaphandle komhlaba - malunga ne- $ 30 kunye nokuthumela; ekuphela kwempazamo kukuba ezi zifumaneka kuphela kwiinyanga zasebusika.
Imithi yobuhle kunye noGrace
Ekuqaleni zazingeniswa zivela eMpuma, iitsheri ezidubula iintyatyambo zixatyiswa ngenxa ye-mystique yazo eyahlukileyo. Elinye icebo lokuzisa ubuhle babo ngaphakathi kukusika amasebe ambalwa malunga neenyawo ezintathu ubude ngaphambi kokuba amahlumela avuleke kwaye uwahlele kwivasi ende njengetafile yokutya embindini.
Ukutya Plans And Programs Celiac Disease Intloko Ukungathembeki Umtshato Izimemo
Iinkampani Zemortgage C
Ukutya Plans And Programs
Uhambo Ship Uqeshiso
igumbi lokuncokola labantwana abangaphantsi kwe-13
Yenza i-geminis kunye ne-leos ziyavana
ntoni)) kuthetha ukuthumela imiyalezo
Ungasusa njani ivumba le-skunk endlini
thumela oku kumhlobo wakho osenyongweni
Ukufunda Tarot Cards